IIMFIHLO EZI-3 EZISEBENZAYO ZOKUPHAWULA IBHOKISI YOKUHAMBA EYA KWENZA UKUBA ULANDELAYO UHAMBISE UMOYA - IIPROJEKTHI ZASEKHAYA
Iimfihlo ezi-3 eziSebenzayo zokuPhawula iBhokisi yokuHamba eya kwenza ukuba uLandelayo uhambise umoya
Inkqubo yokuhamba inzima kuphela njengoko uyenzayo. Ukuba ukuxhoma kwaye ungalungelelananga ngalo lonke ixesha, uya kuza kude nentshukumo ulahlekelwe zizinto ezibaluleke kakhulu ezinje ngengqondo yakho, ixesha lakho kunye nechina kamakhulu wakho. Ngombulelo, kuvela ukuba ungomnye wabo bantu bacwangciswe kakhulu abanayo yonke into iyonke ilula ngokwenene.
Intshukumo ehleliweyo iyehla iye kwiibhokisi ezihamba-hambayo ezihleliweyo. Ukuphawula into nganye nganye sisiqalo esihle (iikomityi kunye nezinto zeglasi, iithoyi zikaKatie). Emva koko, landela esi sicwangciso se-1-2-3 sokugcina yonke into ilungile:
1. Nika ibhokisi nganye inani…
Nombola iibhokisi zakho ezihambayo ngokukodwa, ukuba awuzukuzisusa ( 1 kwe-15 , 2 kweye-15 … Njl.). Ngale ndlela, kulula ukubona ukuba ibhokisi ilahlekile ekuhambeni kakuhle ngaphambi kokuba lifike ixesha lokuba ikhuphe.
2. Emva koko umbala ...
Bamba ipakethi yabamakishi abasisigxina, kwaye unikezele umbala ngamnye kwigumbi elahlukileyo. Mthubi ekhitshini, mfusa kwigumbi lokulala, njl. Njl. Umbala-wekhowudi kwiibhokisi kwigumbi ngalinye elinophawu olukhulu kumbala ochongiweyo ukuze abatshintshi (okanye abahlobo bakho abanesisa) bazi ngqo apho kufuneka balahle khona ibhokisi nganye.
3. Kwaye okokugqibela, iphambili.
Bhala phezulu ( okanye uH ) kwizinto ekufuneka zikhutshiwe kwangoko, Phakathi kwezinto ezinokukhutshwa ngokuthe chu, kunye neZantsi kwizinto ezinokuhlala zipakishwe ixesha elide (okanye ngonaphakade, nokuba yeyiphi eza kuqala).
Nantsi ingcebiso eyongezelelweyo ... beka zonke ezi nkcukacha kumacala eebhokisi endaweni ephezulu . Ngale ndlela unokubona lonke ulwazi olufanelekileyo, nokuba sele eqokelelwe.
→ Ukuba ufuna ukupakisha, zama ezi Iingcebiso ezilula ezili-9 kunye nee-hacks zokwenza usuku oluhambayo lwe-100x lube lula .
Usuku oluhle lokuhamba!
I-15 yee-Etsy zethu eziMnyama eziMnyama eziMnyama ezihonjiswe ngezandla
Zonke iiVenkile zaseKhaya zeNtengiso yeVenkile Usengayithenga ngoku
Iingcamango ezi-16 zeDisk eziMangalisayo eziza kukuNwabisa ngehlobo
Enye into ongaze uyenze ngelixa usebenza
lithetha ntoni inani elingu-555
Ithetha ntoni i-711 ngokwasemoyeni